Myanmar IT Resource Forum » PLATFORM USING ZONE » » Linux Platforms » » UBuntu » Games in Ubuntu
1 Games in Ubuntu on 26th October 2011, 7:37 pm
ကျွန်ေတာ်အရင်က ubuntu မှာ RTS ကို graphics ကောင်းကောင်းနဲ့ game တွေ မရှိဘူးထင်ထားတာ
မနေ့ညကမှ လင့်လေးတစ်ခု facebook မှာ share ထားတာနဲ့ လိုက်ဖတ်မှပဲ RTS ဂိမ်းကောင်းကောင်းတွေ ubuntu မှာရှိနေမှန်းသိရတော့တယ်... ဒါပေမယ့် ကော်နက်ရှင်ကောင်းဖို့တော့ လိုမယ်နော့။ ဂိမ်းတစ်ခုခုကို MB က ရာနဲ့ချီပြီးရှိတာဆိုတော့ wifi သမားတွေအတွက် မထောင်းသာပေမယ့် EVDO/ EDGE သမားတွေကတော့ မလွယ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီ့တော့ ဂိမ်းကစားချင်တယ်ဆို ပထမဆုံး ကိုယ်နဲံနီးတဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်ကလူတွေနဲ့ ပေါင်းထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်
ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ချင်တာက 0.AD ပါ။ သူက ခုမှ alpha version ပဲရှိပါသေးတယ်။ ဂိမ်းရဲ့ graphics render တွေက တော့ အပြတ်မိနေပါပြီ။ game plot ကတော့ Age of Emperor လိုပါပဲ။ တစ်ယောက်တည်း ကစားလို့ရသလို multiplayer network ချိတ်ပြီး ကစားလို့လည်းရပါတယ်။ သွင်းချင်ရင်...ဒီ command လေးကို terminal မှာရိုက်လိုက်ပါ။
နောက် ဂိမ်းတစ်ခုကတော့ SAVAGE2ပါ။ သူကတော့ First person shooter, Role playing Game, နဲ့ Real time Strategy ဆိုတဲ့ ဂိမ်း plot ၃ မျိုး ကို ရောထွေးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ ဆော့ရမယ့် နေရာက ၂မျိုးရှိပါတယ်။ human နဲ့ beast ပါ။ mission ကတော့ တစ်ဖက်ရန်သူရဲ့ စခန်းကို အပြုတ်ဖြုတ်ပြီး ကုိယ့်စခန်းကို အသက်ပေးကာကွယ်ရမှာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ hellbourne ဆိုတဲ့ကောင်လေးတွလည်းပါလာပါလိမ့်မယ်။ ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကနေ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။
ွGlest ကတော့ ဥရောပရဲ့ အလယ်ခေတ် (၁၆-၁၇ ရာစု) ကို အမှီပြုပြီးရေးထားတာပါ။ သိပ္ပံပညာနဲ့ မှော်ပညာတို့ရဲ့ ပဋိပက္ခ တွေကို နောက်ခံပြုထားတာပေါ့။
နောက်ထပ် သူတို့လို 3D မဟုတ်ပေမယ့် 2D ဂိမ်းကောင်းကောင်းလေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။
family gamer တွေအတွက်ပေါ့
2 Re: Games in Ubuntu on 26th October 2011, 8:31 pm
အင်း…ဟုတ်တယ်ဗျို့၊ အသိအင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ သွားပြီး download လုပ်မှပဲ။
3 Re: Games in Ubuntu on 29th October 2011, 12:30 am
Link လေးတစ်ခု Facebook မှာ တွေ့တယ်တဲ့. >.<
Credit လေးဘာလေးပေးလေ. ဘယ်သူရှဲတာတုန်းဆိုတာ...
4 Re: Games in Ubuntu